Previous Article Gọọmenti Anambra Agbapuola Mmiri Ọhụụ n'Urunnebo, Enugwu-Ukwu
Next Article NCTUA Enwee Ọgbakọ n'Awka, Kpọọ Òku Maka Njikọ Aka Gọọmenti Steeti Na Gọọmenti Etiti
Gọọmenti etiti, site n'okpuru ngalaba ụlọ ọrụ ya na-ahụ maka imezigharị na ichekwaba okporo ụzọ, bụ 'Federal Road Maintenance Agency (FERMA)' amalitela idozigharịsị ụfọdụ ụzọ mebiri emebi na mpaghara ebe dị iche iche na steeti Anambra.
Nke a bụ nke pụtara ìhè dịka ụlọ ọrụ ahụ bùùrù ọrụ ha wee gaa n'okporo ụzọ awara-awara ahụ siri Ihiala wee gaa Ọrlụ, bụ ebe ha nọrọ wee na-arụ ọrụ mmetụaka ma na-emezigharịkwa ọtụtụ ebe dị iche iche mebisiri emebì na ebe mere mgbọwa.
N'okwu ya bànyere ya bụ ọrụ mmetụaka, onye nlekọta ọrụ ngo ahụ, bụ Maazị Solomon Ndụkwe kọwara na ụzọ ahụ sò n'otu n'ime ụzọ ole na ole gọọmenti etiti rụtụrụ aka na mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị, sị na o kwesiri ka e mezigharịa ya nke ta nke echi.
O kwùrù na ọ bụ aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ dọtara ya bụ ọrụ site n'ozi o zigaara gọọmenti etiti bànyere ụzọ ya dị na steeti ahụ e kwèsiri ka e dozigharịa; ma sịkwazie na ọ bụghị naanị ụzọ ahụ ka a ga-emezigharị, kama na ọtụtụ ụzọ gọọmenti etiti dị na steeti ahụ sokwa na ndị a ga-emetụ aka.
Na ntụnye nke ya, eze ọdịnala Ihiala, bụ Igwe Thomas Obidịegwu, bụ onye jiri ụkwụ ya garuo n'ebe ahụ ileta ka ọrụ ahụ si aga, kèlèrè Gọvanọ Obianọ maka ịdọta ya bụ ọrụ, bụ nke o kwuru na ọ ga-enye akz ịkwàlite njem udo na ije awele, ọbụnqdị dị o tòkwàzịrị gọọmenti etiti maka ịña ntị nyere ya bụ mkpesa ma gbatakwa ọsọ enyemaka n'ozuzu òkè, dịka a tụrụ anya.
N'akụkọ dịkwa ka ibè ya, aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ nọrọ na nso-nso a wee kwuo na ọrụ okporo ụzọ ga-amalitekewa ịgawanye n'ihu n'okporo ụzọ dị iche iche na steeti ahụ.
Gọvanọ Obianọ, nke ọ bụ osote ya bụ Dọkịta Nkem Okeke nọchitere anya ya n'ofufè nrò pụrụ iche weere ọnọdụ n'ụlọ ụka 'Monica’s Anglican Church Enugwu-Ukwu' dị n'okpuru ọchịchị Njikọka, kpọkùkwara ndị Anambra ka ha gaa n'ihu ịkwàdò ya bụ ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ, n'ezi ọrụ mmepe dị iche iche na-aga n'ihu na ngalaba nakwa mpaghara niile nke ya bụ steeti.
Ọ dụrụ ha ka ha na-atụ ụtụ isi ha n'oge nakwa otu o kwesiri, na-etinye aka n'ịkwàlite mmepe obodo, ma na-agbakwazị ama ma ọ bụ na-eweta mkpesa n'aka ndị ọrụ nchekwa bànyere nzọ-ụkwụ ọbụla ha na-enyo enyò na mpaghara ha, ọkachasị ugbu a oge mmemme ekeresimeesi na-akpụdòbe nso, maka na, dị ka o siri kwuo, ọrụ mmepe na nchekwa obodo abụghị nke dịịrị naanị gọọmenti.